Ibi na London, akwadoro? | Akụkọ Njem
Maria | | England, njem
London abụghị naanị isi obodo United Kingdom kamakwa otu n'ime obodo ndị kachasị mkpa n'ụwa ma site na echiche akụ na ụba, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ọha na eze. N'ime ya, njirimara nke ọdịbendị Bekee gwakọtara na oge a na multiculturalism nke ụdị XNUMXst narị afọ. Ihe ndị a niile na-enyere ọtụtụ nde mmadụ aka ịbịa leta ya ma nọrọkwa ebe ahụ oge iji bie ndụ ọhụụ ọhụụ na-atọ ụtọ.
Ọtụtụ ndị Spain na-ahọrọ London dị ka ebe ha na-aga ezumike ụbọchị ole na ole na mba ọzọ kamakwa dị ka ọrụ ma ọ bụ ebe agụmakwụkwọ, iji meziwanye usoro ọmụmụ ha ma ọ bụ Bekee ha. Ugbu a, London bụ obodo dị mgbagwoju anya dị iche na nnukwu obodo Spanish, ọ ga-adị mma ka ị biri na London? Anyị na-atụle ya n'okpuru.
1 Mụọ Bekee
2 Oru na london
3 Mee ka ọrụ gị ka mma
4 Hapụ mpaghara nkasi obi
5 Izute ndị si ebe ndị ọzọ
6 Ego ibi na London
7 Ọtụtụ oge ezumike
N’ịmụ asụsụ ọhụrụ, ọ dị oké mkpa itinye ya n’ọrụ ugboro ugboro iji nwee ike ịga were were na ikwurịta okwu nke ọma. Onweghị ihe dịka imikpu onwe gị na omenaala na asụsụ ọzọ iji mechaa mụta ya. Nke a bụ ihe na-eme n'asụsụ Shakespeare na ọ bụ ya mere na ọtụtụ puku ndị Spain na-ebu akpa ha kwa afọ iji mezuo ọkwa ha na London.
Ebe ọ bụ na ị ga-agbasi mbọ ike mgbe niile ime ka gị na ụmụ amaala ghọta ya, ọ bụ ụzọ kachasị mma iji meziwanye ma nwee ọganihu. Ọbụlagodi na ọ bụ maka obere oge, ọ bụrụ na ị kwaga London ị ga-ahụ otu ị ga - esi malite iji aha ezumike ụfọdụ nke ndị Britain.
Oru na london
Ezigbo ọkwa nke Bekee ga-emepe ọtụtụ ọnụ ụzọ maka gị n'ọrụ, ma na obodo gị ma na London n'onwe ya. Ọ bụrụ na ị na-asụ ya nke ọma ị nwere ike ịchọta ọrụ ngwa ngwa mana ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike jiri oge ị ga - eji rụọ ọrụ na - amasịghị gị. dị ka ọ nwere ike ịbụ ile ọbịa ma ọ bụ nhicha. O nwere ike ọ gaghị adị mma maka gị mana ị ga-ebido ihe. O ga enye gi ohere isoro ndi gi na ha na aru ako oru asusu ma meziwanye mkparita uka gi.
Ọrụ ọzọ a na-arụkarị bụ nke au pair, ya bụ, ịzụ nwa na ịrụ ụlọ maka ebe obibi, nri na obere ụgwọ a na-akwụ kwa izu.
Ọ bụrụ na ọkwa Bekee gị dị mma, ịnwere ike ịchọ ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe metụtara ngalaba gị. Echegbula ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ezigbo ọrụ na mbụ, gbado anya na imeziwanye Bekee gị na inweta ahụmịhe. A na-eji nke a akpọrọ ihe mgbe niile na ụlọ ọrụ niile.
Mee ka ọrụ gị ka mma
Uru ọzọ ị na-arụ na London bụ na ị nwere ike ịkwalite ọrụ ọrụ gị ebe ọ bụ na ị na-arụ ọrụ n'obodo nwere njirimara ndị a ga-emepe ọtụtụ ọnụ ụzọ na Spain na ụwa ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị jisie ike nweta ọnọdụ dị mma nke akwụgoro ụgwọ nke ọma, ịnwere ike ịchekwa ma bie udo nke uche n'oge ịnọ. Nke a na - ewetakwa ohere maka nkwalite maka na n'okwu akụ na ụba na ọrụ, ọnọdụ dị mfe na United Kingdom karịa Spain.
Hapụ mpaghara nkasi obi
Ezigbo ihe atụ nke ịpụ na mpaghara nkasi obi anyị na-abanye n'ihe a na-amaghị ama, dịka nke ahụ bụ ebe ihe pụrụ iche nwere ike ime. Nọgide na-arụ ọrụ ahụ ị kpọrọ asị naanị n'ihi na ọ nwere usoro dị mma kama ịchọ nke ọhụrụ ọbụlagodi na mba ofesi na-etinye onwe gị na mpaghara nkasi obi gị.
Ọ bara uru ibi na London? N'ezie ee. Mgbe inwere ohere ịme ihe ohuru nke nwere ike iwere gị uru n'ụzọ ụfọdụ (ọ bụrụ ọrụ, ọgụgụ isi ma ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya) ma ị kpebie ime ya, ị na-ahapụ mpaghara nkasi obi gị na nke ahụ bụ ebe anwansi na-eme. Kedu ihe ị na-eche?
Izute ndị si ebe ndị ọzọ
Ibi na obodo cosmopolitan dị ka London bụ nnukwu uru ebe ọ bụ na ị nwere ike izute ọtụtụ ndị si mba dị iche iche, nke bụ ezigbo ahụmịhe dị mma n'ihi na ọ na-emepe uche gị. banyere ọdịbendị ndị ọzọ, gastronomy, egwu ... na ọ na-enye gị ohere itolite dịka mmadụ. Na isi obodo Britain, e nwere ọtụtụ ụlọ mmanya na ebe ị ga-ahụ ndị ọhụrụ wee mepee mmekọrịta gị.
Agbanyeghị, ọ bụ eziokwu na iso Bekee emekọrịta ihe na-efu obere obere mana ozugbo ị mepere kọntaktị ị nwere ike ịnweta enyi maka ndụ.
Ego ibi na London
Onye ọ bụla dị iche na ohere ị nwere ibi ogologo oge na London ga-adabere na ọrụ ị nwere ike ịnweta ebe ahụ na ego ị nwere, nke ọma, ka anyị ghara ịrafu onwe anyị, obodo a dị oke ọnụ. Na mbu ị ghaghi ịchụ ọtụtụ aja iji gbatịa ego gị n'ihi na ịchọta ọrụ n'ime ụbọchị ị rutere abụghị ihe na-eme ngwa ngwa. Gbalịa ịchekwa ihe niile kwere omume iji gbochie nsogbu ego.
Ọtụtụ oge ezumike
Obodo buru ibu dị ka London na-enye ọtụtụ atụmatụ ntụrụndụ maka ndị njem na ndị bi na ya. Slọ ihe ngosi nka, ihe nkiri, bọọlụ, egwuregwu, ihe ncheta, ụzọ ịzụ ahịa, ụlọ mmanya na ụlọ mmanya ndị ọzọ ... Mee atụmatụ nke ọma ihe ịchọrọ ime na oge gị n'efu n'ihi na enwere ọtụtụ ihe ịhọrọ.
Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ọrụ nke ọnụahịa ha dị elu, dị ka ihe nkiri ma ọ bụ egwu egwu, yabụ ị ga-elebara anya maka atụmatụ efu nwere ike ịme n'obodo ka ịghara ịla n'iyi onwe anyị mgbe ị na-apụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » Ibi na London, akwadoro?